Added by MeroReport on March 31, 2015 at 10:30am — No Comments
उनलाई नजिकबाट स्पर्श गर्ने मेरो पहिलैदेखीको सपना यस पटक समयले पुरा गरि दिदाँ म कम्ता खुसी छैन । सधैं कति अप्रत्यक्ष वार्तालाप र मिठा कल्पनामा डुब्नु भन्दै यसपटक म भेट्न आउने कुराले उनि पनि खुसी थिईन ।
राजधानीको उकुसमुस चिर्दै उनिसँगको मिठो भेट अनि स्वर्गिय स्पर्शको कल्पनामा डुब्दै म यात्रामा थिए । भेट्ने ठाँउ सुन्दर-पश्चिमको चिसापानी तय भएको थियो ।
मध्यरातमा म चिसापानी झर्दा उनि मेरो पर्खाईमा रहिछन् त्यो निष्पट्ट रातको कुनै वास्ता नगरी । उनको सिमाना टेक्दा नैं मलाई मिठो सुस्केरा…
Added by Kp anmol on March 14, 2015 at 5:00pm — 1 Comment
किन बढ्दो छ घरेलु हिंसा ?
‘वषौंदेखि श्रीमानले दिएको यातना सहें,अब मैले न्याय कहिले पाउँछु ?'-अमृता श्रेष्ठ कार्की,बाह्रविसे
‘श्रीमान र सासुससुराबाट धेरै पटक यातना पाएँ, त्यो क्रम अझैं जारी छ ।’ -मंगली तामाङ,कर्थर्ली–७
‘श्रीमानको पिटाईबाट मेरो नौ महिनाको बच्चा खेर गयो ।’-अनिता श्रेष्ठ ,बाह्रविसे–९
यी केही उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लामा यस्ता धेरै घरेलु हिंसाका घटना…
Added by Sundar Shireesh on March 7, 2015 at 6:00pm — No Comments